Sat, Jan 18, 2020 at 5:38am
मौरीलाई चरन क्षेत्र अभाव हुँदा घट्यो मह उत्पादन #आहा खबर# संसदबाट एमसीसी पारित गर्न दबाब दिने कांग्रेस संसदीय दलको निर्णय #आहा खबर# एमएम राष्ट्रिय क्रिकेटको उपाधिका लागि आर्मी र पुलिस भिड्दै #आहा खबर# शहीद स्मारक लिग : शीर्ष स्थानको मछिन्द्र पराजित #आहा खबर# इरानले युद्ध नचाहेको राष्ट्रपति रौहानीको भनाइ #आहा खबर# चुनौती विश्लेषण गरेर सुरक्षामा खट्न शैलेन्द्र खनालको निर्देशन #आहा खबर# विप्लवलाई सहमतिमा आउन आग्रह #आहा खबर# होचा व्यक्तिको रुपमा विश्व कीर्तिमान राख्ने खगेन्द्रको निधन #आहा खबर# न्याय दिन विलम्ब गर्न हुँदैन : पूर्वप्रधानन्यायाधीश उपाध्याय #आहा खबर# गायिका आस्था राउतमाथि छानबिन सुरु, पक्राउ हुन सक्ने ! (भिडियोसहित) #आहा खबर# ८७ मुलुकका श्रमिक नेपालमा, सबैभन्दा बढी चिनियाँ #आहा खबर# स्ववियु निर्वाचनको तयारीसँगै शैक्षिक मुद्दामा विद्यार्थी सङ्गठन #आहा खबर# गायिका आस्था राउतविरुद्ध प्रहरी जवान रमिता श्रेष्ठको उजुरी #आहा खबर# डेढ वर्षमै ५०६ विरुद्ध १५ अर्बको कर छली मुद्दा #आहा खबर# तनहुँ जलविद्युत् आयोजना : ‘केवल टनेल’ निर्माण शुरु #आहा खबर#
शनिबार, २ कार्तिक २०७६,	आहाखबर
आहाखबर, २ कार्तिक ।
हामी सबैको घरमा खाना त सधैं पाक्छ तर त्यो खाना एकैपटकमा खाएर सकिन्छ त ? कुनै दिन त त्यो सकिएला तर सधै त्यसो नहुन पनि सक्छ । यस्तो अवस्थामा प्रायः जसो मानिस भने त्यसलाई केही समय पछि वा भोलीपल्ट तताएर खाने गर्छन् ।
कतिपय अवस्थामा नयाँ खाना बनाउने समय नभएपछि पनि मानिसहरु अघिल्लो दिनको खानालाई तताएर फेरि प्रयोग गर्छन् ।
यसो भन्छन् विज्ञहरु :
एक पटक फ्याँकिसकेको खानालाई फेरि तताएर प्रयोग गर्नु उतिसाह्रो उचित नहुने विज्ञहरु बताउँछन् । त्यसप्रकारको खानालाई फेरि तताउँदा त्यसमा भएका बिभिन्न तत्व अर्थान् केमिकलहरु परिवर्तन हुने भएकाले सधै त्यसो गर्नुबाट बच्नुपर्छ ।
अझ कतिपय विज्ञहरुको रायलाई मान्ने हो भने त त्यसरी फेरि तताइएको खाना खानाले त्यसबाट फूड प्वाइजनिंग समेत हुन सक्छ ।
खाना तताइसकेपछि के हुन्छ ?
यो कुरा सबैलाई थाहा भएकै हो की खानामा प्रशश्त मात्रामा सही व्याक्टेरियाहरु पाइने गर्छन् । तसर्थ एकपटक पाकिसकेको खानालाई फेरि तताउँदा त्यसबाट फूड प्वाइजनिंग हुने सम्भावना समेत बढेर जान्छ । उदाहरणका लागि चामलमा जीवाणुको विजाणु रहेको हुन्छ भने त्यो पाकेर भात बनिसक्दासमेत पनि जिवित नै रहन्छ ।
चामल पाकेर भात भैसकेपश्चात विस्तारै त्यसमा तापक्रम समेत घट्दै जाँदा खानामा रहेको विजाणु ब्याक्टेरियामा परिणत हुन थाल्छ । यस्तो अवस्थामा एकपटक पाकिसकेको खानालाई फेरि तताउँदा उक्त व्याक्टेरिया टक्सिकमा परिणत हुन थाल्छ भने जसले मानिसको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल प्रभाव पार्न सक्छ ।
यी चीजहरुलाई फेरि कहिल्यै नतताउनुस्
विशेषज्ञहरुका अनुशार बिभिन्न खाद्य पदार्थ मध्य विशेष गरी आलु, चिकेन, चामल, मशरूम, अण्डा, धनियाँ तथा चुकन्दर आदीलाई कहिल्यै पनि फेरि तताएर खानु अनुकुल मानिदैन ।
त्यस्तै, पालक, धनियाँ जस्ता हरिया सागसब्जीमा आइरन तथा नाइट्रेट्स भरपूर मात्रामा पाइन्छ । जब हामी यी नाइट्रेट्सहरुलाई फेरि तताउनाले फेरि नाइट्राइटमा परिवर्तन हुने भएकाले त्यो खाना उचित मानिदैन । तसर्थ यस्ता खाद्यान्नहरुलाई सकेसम्म फेरि तताएर कहिल्यै नखाऔं ।
उपाय के छ ?
हरेक समस्यामा उपाय त भैहाल्छ । तसर्थ आजैदेखि आफ्नो परिवारले वा आफूले एकैपटकमा खाइसक्ने खाना मात्र पकाउन थालौं । खाना बढी पकाएर फालिनुभन्दा वा त्यसलाई फेरि तताएर खानुभन्दा बरु केही कम नै भए पनि अवश्य फरक पर्नेछैन ।
बिहान चाँडै उठ्नुस्, यस्ता छन् फाइदा